Profile Company - Micomme Technology Technology Development Co., Ltd.
Nidaamkayaga Daryeelka Caafimaadka ee M + Daryeelka Caafimaadka wuxuu awood u leeyahay inuu falanqeeyo xaaladda bukaan-socodka waqtiga-dhabta ah iyo inuu la socdo daaweynta bukaannada si loo wanaajiyo natiijooyinkooda xogta weyn.
Hal-abuurnimadaan madax-bannaan waxay dhiseen faa'iidooyinkayaga tartan. Illaa iyo hadda, inka badan 100 patentiyo ayaa oggolaaday ama naga oggolaaday. Mustaqbalka, waxaan u heellan nahay bixinta tayada ugu wanaagsan ee badeecada iyo adeegyada dhammaan macaamiisheenna.
Platform Health Care Platform waa adeeg gaar ah 7 * 24 saac kadib iibka adiga. Iyadoo aan loo eegin shaqada, safarka meheradda, safarka, waxaad wali samayn kartaa kormeer waqti-buuxa ah waqti kasta, meel kasta. Waxay ku siinaysaa adiga iyo qoyskaaga mas'uulka ugu sareeya. M + Daryeelka Caafimaadka wuxuu isku dari karaa dhammaan xogta hurdada wuxuuna si toos ah u abuuri karaa warbixin qiimeyn daaweyn xirfad leh. Xitaa markaad guriga joogtid, waxaad heli kartaa barnaamijka daryeelka ugu hufan iyo tayo sarre.